Rabi Lamichhane बोल्दा बोल्दै आँ'खाभरि आँ'सु ! 'मलाई ढुंगाले हान्नु' भन्दै News 24 बाट यसरी बिदाई ( रबि दाई लाई मायाँ गर्नेहरुले सेयर गराै) -
Home News Rabi Lamichhane बोल्दा बोल्दै आँ’खाभरि आँ’सु ! ‘मलाई ढुंगाले हान्नु’ भन्दै News...
Rabi Lamichhane बोल्दा बोल्दै आँ’खाभरि आँ’सु ! ‘मलाई ढुंगाले हान्नु’ भन्दै News 24 बाट यसरी बिदाई ( रबि दाई लाई मायाँ गर्नेहरुले सेयर गराै)
Rabi Lamichhane बोल्दा बोल्दै आँ’खाभरि आँ’सु ! ‘मलाई ढुंगाले हान्नु’ भन्दै News 24 बाट यसरी बिदाई
Previous articleTikTok मा भाईरल बुवा-छोरी मिडियामा | देख्ने जति सबै च’कित पर्छन् हेर्नुहोस् Aava Thapa & Om Thapa
Next articleइजरायल जान चाहानेलाई खुशीको खबर, पहिलो चरणमा केयरगिभरका ५ सय नेपाली लगिँदै, यस्तो छ प्रक्रिया Israel (जानकारीका लागि सेयर गराै)